अध्यक्षमा पुन: ओली निर्वाचित : रावलले हार्दा योगश, अष्टलक्ष्मी र गोकर्णले कसरी जिते ? रावललाई आफ्नै १० भाईको धोका ! « Yoho Khabar
काठमाडौँ — नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा पुनः निर्वाचित भएका छन् । प्रतिस्पर्धी भीम रावललाई १ हजार ६ सय १७मतान्तरले पराजित गर्दै ओली दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । ओलीको विपक्षमा रहेका सबै उम्मेद्वारी पराजित भएका छन् । एक रिपोर्ट ।